gallery – Eranimahal
पाल्पा – भगवती जात्राकाे पूर्व सन्ध्यामा भवगती दुलही झै सिंगारिएकी छिन् । कृष्णाजन्माष्टमीकाे रात जाग्राम बस्ने प्रचलन रहेकाले पनि भगवती जात्राकाे पहिलाे रात भगवती मन्दिरलाइ सजाइएकाे हाे । याे वर्ष
पाल्पा – पाँच दिन पहिले तानसेन–८, गौडेपुल नजिकै खसेको पहिरो पुन खस्ने क्रम जारी छ । केही दिन पहिले गएकाे पहिराे शुक्रबार देखि भने निरन्तरजस्ताे गइरहेकाे छ । यहाँ पहिराे
पाल्पा – जिल्लाको रैनादेवी छहरा–४, अमलाबासका किसानले दुई दशकदेखि व्यावसायिक सुन्तला खेती गरिरहेका छन् । अमलाबासका २९ घरपरिवारले अहिले पनि सुन्तला खेतीबाट वार्षिक डेढ लाख देखि १५ लाख रुपियाँसम्म आम्दानी
पाल्पा– तानसेनको बिशालबाजार टोल विकास संस्थाको आयोजनामा शुक्रबार सडक खाना महोत्सव भएको छ । तानसेनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सडक खाना महोत्सव गरिएको हो । महोत्सवमा स्थानीय
पाल्पा – पाल्पाको पूर्वी भेग निस्दी काउलेडाँडा अहिले आन्तरिक पर्यटनकको आकर्षणमा परेको छ । तानसेनदेखि ७० किलामिटर पूर्वमा रहेको काउलेडाँडामा सवारीसाधनबाट तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ । एक दशक अघिसम्म छायाँमा
पाल्पा – दुई सय वर्षअघि जीतगढी किल्ला विजयी गरेको सम्झनामा तानसेनमा शनिबार भगवतीको भव्य रथ यात्रा गरिएको छ । विस १८७१÷७२ मा नेपालको पश्चिमी भेगको तैनाथवाला कर्णेल उजिरसिंह थापा नेतृत्वको
तानसेन – असारमा गरिने रोपाईँको झल्को दिने गरी शनिबार तानसेनमा गाउँ–गाउँबाट जात्राका लागि आएका टोलीले रोपाई जात्रा प्रदर्शन गरेका छन् । परम्परादेखि नै हुँदै आएको लोपोन्मुख रोपाई जात्रामा हली, बाउसे,
तानसेन – श्रीनगरमा रहेको भ्यूटावरको मर्मत तथा रङ्गरोगन गरेर चिटिक्क पारेपछि यहाँ घुम्न आउने पर्यटक बढेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत भ्यु टावरको बाँकी काम गरेपछि भ्यु टावरबाट देखिने दृश्य अवलोकन
असार लाग्याे : मानाे खाएर मुरी उब्जाउन पाल्पाका किसान खेतमा (फाेटाे फिचर)
पाल्पा – याे वर्ष अझै वर्षात् सुरू भएकाे छैन । पाल्पाका विभिन्न फाँटमा धान राेपाइ सुरू भइसकेकाे छ । किसान पानीकाे पर्खाइमा छन् । तर पानी अझै पर्न सकेकाे छैन
ऐतिहासिक सम्पदाभित्रकाे ‘तानसेन’ (फाेटाे फिचर)
पाल्पा – तानसेनको नारायणस्थान ओझेलमा परेको ऐतिहासिक स्थल हो । आफ्नो छुट्टै कला र पहिचान भए पनि नारायणस्थान प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ । १६ औँ शताब्दीमा अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा
पाल्पाकाे मगर बस्तीमा चिटिक्क कुँडुले (गाेलाे) घर
पाल्पा – पाल्पाकाे पूर्वी भेग झिरूबासमा देखिएकाे परम्परागत कुँडुले घर । तर त्यहाँ स्थानीय बालिकाले घरकाे लागि आवश्यक पानी बाेक्दैं । दश वर्ष अघिसम्म यस भेगमा छ्याप्छ्याप्ती देखिने कुँडुले घर
नयाँ बजेटमा के के छन् ? (हेर्नुहाेस मुख्य विशेषता सहित)
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा अगामी आव २०७६-०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे हाे । यस्तो छ आगामी